Ukusebenza kwe-Amazon kuyasebenza njani?
Ngaba uye wakha wazibuza ukuba i-Amazon ikhetha njani ixabiso lemveliso nganye? I-Amazon isebenzisa i-algorithm yayo ekhethekileyo ebizwa ngokuba ngu-A9. NjengeGoogle, i-Amazon igcina ngasese indlela i-algorithm yabo eyintloko eyenziwa ngayo kwaye i-Amazon kuphela iyazi ngokuqinisekileyo oko kudibaniswe kwinkqubo yabo yokuma.
Ngokutsho kophando olusandul 'utsha, i-Amazon iye yafaka iGoogle ngenani labasebenzisi abafuna iimveliso. Ke mna, yisona sizathu esona sizathu sokugcina i-algorithm ekhoyo ngasese. Kungenzeka ukuba yingxenye yesizathu sokuba kutheni i-algorithm ihlaziywa kwaye ihlaziywa yi-Amazon.
Njengabameli bama-Amazon, enye yeenjongo eziphambili ze-Amazon A9 i-algorithm kukubonelela ngabasebenzisi ngezona ziphumo eziphambili zokukhangela. Yingakho bahlala bezama ukufumana iziphumo eziphambili kunye nokuphucula amava okucinga. U-A9 usetyenziso lwe-algorithm ngokuzenzekelayo ufunda ukudibanisa iinkalo ezininzi. Iinkcukacha zeenkcukacha zeenkcukacha zee-Amazon zinika iinkcukacha ezininzi. Ngoko, i-Amazon inokufunda kwiipateni zophando zangaphambili kwaye zilungelelanise le nkcukacha kwizinto ezibalulekileyo kubaxhasi. Ngendlela enjalo, umthengi ngamnye kwi-Amazon ufumene iphepha lekhasi lokukhangela eyahlukileyo ngokubhekiselele kumphandi wakhe wangaphambili, ukuthenga kunye nokukhetha. Zonke iziphumo zophando zifunyenwe kwaye zifakwa kumyalelo wento efanelekileyo kakhulu kumsebenzisi.
Kulo thuba elifutshane, siza kuxubusha izinto eziphambili zangaphakathi nangaphandle ezichaphazela ubukhulu be-Amazon kunye nezinye izinto ii-Amazon eziziqwalaselayo zinika ipeji ethile kwiphepha ngalinye.
Iimeko ze-Amazon zangaphakathi zendawo
Izinto eziphambili zangaphakathi ze-Amazon eziqwalasela iimveliso zolu hlobo ziquka:
Azikho izikhokelo ezicacileyo malunga neendlela ze-Amazon ezimiselweyo. Nangona kunjalo, sinokuthi i-Amazon iqwalasele izinto ezifana nombolo kunye nemigangatho yokubuyiselwa komsebenzisi kunye neenkwenkwezi nganye zemveliso..Ngaphezu koko, ama-Amazon abala inani lokuchofoza ekukhangekeleni kunye nezinye izinto zokuziphatha ezichaza amava ophando lomsebenzisi.
Iimpawu zamashishini eziphambili
Nento yonke into eyenziwa yi-Amazon inenjongo enye engqondweni. Oko kukunyusa inzuzo kunye nenzuzo yoshishino jikelele. Kodwa ayikacaci oko ama-Amazon asetyenzisayo ukulandelela nokulinganisa amashrikhi amashishini abalulekileyo.
Iimitha zamatriki zokusebenza ze-Amazon
Ukwaneliseka kwabathengi ngenye yeyona milinganiselo yeyona ntsebenzo ebalulekileyo ye-Amazon ithatha ingqalelo ukujonga indlela oqhuba ngayo umthengisi kwi-Amazon. Abathengisi be-Intanethi bangajonga indlela abaqhuba ngayo ngokuphathelele ukwaneliseka kwabathengi, ngokubhekiselele kwiDashboard ye-Akhawunti yezempilo.
Ziziphi izinto ezinokuchaphazela isikhundla sakho se-Amazon?
Ireyithi yokuthengisa ibaluleke kakhulu kwi-Amazon usetyenziso olunokuchaphazela ngqo indawo yemveliso yakho kwiphepha lemiphumo yophando. Iphakamileyo yakho yokuthengisa, isiphumo sakho sokufaneleka xa abathengi befuna umkhiqizo abaya kuthenga. Ukuphucula ixabiso lakho lokuthengisa kwi-Amazon kufuneka ubenze amacebo amnandi.
Xa umsebenzisi efaka umbuzo wakhe kwibhokisi lokukhangela i-Amazon, unokucinga ngokuthenga into ethile. Ukukhuthaza umthengi ukuba enze umyalelo, i-Amazon inikezela uluhlu lwemveliso efunyenwe yi-algorithm kwaye ibhalwe ngokulandelelana komgangatho. Xa umsebenzisi efumana uluhlu oluchaphazelekayo kwimikhiqizo yombuzo, i-Amazon iqalisa ukulandelela oko bakchofoza kwilandelayo. Ngoko, ama-Amazon ahlawula ireyithi yokuqhafaza kunye nokudibanisa la manani kwi-algorithm.